Neverwinter Nights Enhanced Edition, kudzoka kweimwe yemitambo yekutanga yevhidhiyo yeGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Nyika yekutamba haina kumbobvira yawana pamwe naGnu / Linux, kunyangwe pave paine kusarudzika. Imwe yeakasiyana aya anga ari Neverwinters Nights, mutambo-wekutamba kana RPG mutambo wevhidhiyo wakaburitswa makore gumi nemashanu apfuura uye wakaburitswa kwete chete yeWindows kana Mac asiwo yeGnu / Linux, kuve mumwe wekutanga multiplatform vhidhiyo mitambo yaive yakafanana pamapuratifomu ese.
Kunyange chiri chokwadi kuti iyo Linux vhezheni yakanga isina rutsigiro rukuru, ichokwadi zvakare kuti yakapa vazhinji vanoita-kutamba uye vanoda Linux kuti vafare vasina kushandisa chero kupaza kana emulator. Zvakanaka, mushure memakore gumi nemashanu emutambo iwoyo wevhidhiyo, Beamdog akazivisa kuburitswa kweiyi ngano vhidhiyo mutambo, chinyorwa icho chinodaidzwa chinonzi Neverwinter Nights Enhanced Edition.
Iyi vhezheni ichave yekuyeuchidza zvekare klikiki vhidhiyo mutambo uyo ichave iripo kune iyo Steam chikuva, saka isu hatigone chete kuiisa kuburikidza neyedu terminal asiwo kushandisa iyo Steam chikuva.
Neverwinter Nights Yakawedzerwa Edition Ichave inoenderana neshanduro dzekare dzemutambo, zvinoreva kuti mods, mitambo yakachengetedzwa uye kunyange zvinhu zvakaunganidzwa zvinoenderana neiyi vhezheni itsva. Graphics uye Mavhidhiyo akagadziriswa uye akagadziridzwa kuita 4K fomati, uine yakawanda up-to-date mufananidzo wevhidhiyo mutambo.
Mavara uye zviitiko zvakagadziridzwa uye kwete izvo chete, asi timu yekutanga yekusimudzira yakasangana neiyi vhezheni, ichiita nhau uye zvikumbiro zvakakumbirwa nemutambo wevhidhiyo Nharaunda panguva iyoyo.
Beamdog haina kungo gadziridza mutambo wayo weWeverwinter Nights Enhanced Edition asi irikuunzawo mitambo yayo yemavhidhiyo kune mamwe mapuratifomu.. Neverwinter Nights Enhanced Edition uye iyo Baldur's Gate saga yakaendeswa kune Android, kuwedzera kune Steam. Parizvino iyi vhezheni haigone kutengwa asi ichave ichiwanikwa mumazuva mashoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Neverwinter Nights Enhanced Edition, kudzoka kweimwe yemitambo yekutanga yevhidhiyo yeGnu / Linux
Kali Linux 2017.3 ikozvino inowanikwa nenhau dzinonakidza